सिटामोल खान नपाएको अवस्था विद्यमान – www.agnijwala.com
सिटामोल खान नपाएको अवस्था विद्यमान
काठमाडौं,२ बैशाख– सिटामोल खान नपाएको अवस्था यहाँ विद्यमान छ, यसलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने होला ? वर्षेनी हैजाको समस्या देखिन्छ, यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने होला ? भन्ने खालको अन्यौल चाँही छ ।’ कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलको अन्यौलले भरिएको प्रश्न हो यो ।
आफ्नो काम र अधिकारलाई लिएर जनप्रतिनिधिबीच रहेको अन्यौल कतिसम्म छ भन्ने उदाहरणका रुपमा उनको भनाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । रावल भन्छन्, ‘संविधानले एक खालको अनुसूचीमा ग्यारेन्टी अवस्था चाँही हो । तर पनि त्यो प्रक्रियामा मात्र जाने कुरा भएन, जनतालाई तत्काल सेवा दिने कुरा छ ।
हामी कसरी अघि बढ्ने ?’ मुलुक संघीय संरचनामा परिवर्तन भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार बोकेर गाउँ–गाउँ पुगेका स्थानीय तह र प्रदेश तथा तीनका प्रतिनिधिले काममा हुने गरेको ढिलासुस्तीको केन्द्रीय रोग समेत साथै लगेको प्रष्ट भएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
заказать телефон из китаяfree cam women